Kroger Chefbot: Nnukwu Ihe A Ga-eji Na-enye Uru Na Social Media na Bot Technology | Martech Zone
Kroger Chefbot: Nnukwu ihe eji eme ihe na ịnye uru na Social Media na bot Technology
Kroger bụ nnukwu ụlọ ahịa mpaghara m hụrụ n'anya n'ezie. Ha na-enye nnyefe ụlọ, iburu, ndenye ọpụpụ onwe onye, ​​nyocha nyocha, na ndị ọzọ. Companylọ ọrụ ahụ na-amata na ịnye ha abụọ uru na ọrụ ndị ahịa bụ ihe kachasị mkpa maka nzukọ ọ bụla.
Teknụzụ, n'ezie, bụ ụzọ ịnabata nke a. Nke ahụ apụtaghị na ndị mmadụ na usoro adịghị mkpa, ọ pụtara naanị na itinye ego iji nye ndị ahịa gị uru bụ n'ikpeazụ bụ itinye uche n'echiche gị.
Ewebata Kroger Chefbot
Ihe ohuru ohuru ha bu ezigbo nma… Chidinma Chefbot. Nke a bụ otu o si arụ ọrụ:
Seta foto nri ị nwere.
Tweet foto gị na @IGIHE
Na bot ga-ezighachi Ezi ntụziaka!
Emepụtara na mmekorita ya na ndi oru ihe omuma na ndi oru mgbasa ozi 360i, na ndị mmekọ teknụzụ Lablọ nyocha kọfị Kroger's Chefbot na-enye mkparịta ụka mkparịta ụka enyi na enyi maka ịhapụ ihe omume oge nri na mkpofu ihe oriri n'ụlọ-nsogbu ndị a na-ahụkarị maka ọtụtụ ezinụlọ ka ha na-erikọ nri ọnụ n'ụlọ.
iji Nkọwa, Chefbot's AI na-enyocha foto iji mata ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe 2,000, na-emeghe 20,000 Kroger Ezi ntụziaka maka ndị ọrụ iji sie.
Ahụmahụ Chefbot na-agụnye ọtụtụ ntụpọ, na-enye mmekọrịta mmekọrịta mmekọrịta site na Twitter jikọtara ya Kroger.com ngwa ahia e-commerce. Ka oge na-aga site na nghọta a mụtara, nchọpụta nri Chefbot na teknụzụ ọchụchọ usoro ga-agbanwe ma melite, na-enye ohere nke ngwa ọrụ a dị ike ịmalite.
Yabụ kedu ka Chefbot si arụ ọrụ nke ọma?
Ọ na-arụ ọrụ nke ọma! O doro anya na m gbalịrị ịtụba ya curveball na ụfọdụ ihe dị iche iche dị iche iche na mbụ ... nke na-adịchaghị mma! Maka ule nke abụọ m mere, etinye m akpa nke ọkụkọ oyi na oyi kpọnwụrụ na tebụl wee zipụ ya.
Enwetara m ngwa ngwa:
Nyochaa Chefbot: broccoli, na ọkụkọ.
Ọ bụrụ na ziri ezi zaghachi: "OK"
ma ọ bụrụ na ọ bụghị, depụta ihe ndị na-ekewa site na commas maka ịgbakọ ziri ezi. Thx! pic.twitter.com/4NW7KwyW8B
- Kroger Onyekwere (@iamonyema) October 27, 2020
Mgbe m zara, Ọ D: MMA:
Ndị a ga - abụ oke gị ... gịnị ka akpọrọ ya (?) Nri ihe oriri (?)
Nke a bụ ihe m chọtara ka ị mee: https://t.co/Sp3EMNmlrY pic.twitter.com/RcoW4prg1U
Ihe si na ya pụta bụ ụfọdụ nnukwu Ntụziaka echiche! Ọ bụrụ na ị na-nitpicking… eleghị anya ị na-ekwu na ya nyochawa abụghị broccoli na m nwere akpa nke. Ezi… na m na-eche ma, kama, Kroger nwere ike iji agwa ude na mgbakwunye na nke oyiyi ude ịgafe Efrata na n'ezie ngwaahịa na ike ga-esịne ke Ezi ntụziaka.
Kedu ụzọ ọ bụla, ọ bụ nnukwu ọrụ. Ma, obi abụọ adịghị ya na ọ na-enweta Kroger ụfọdụ mmata nke ọma yana yana ekele maka inye aka. Abụ m onye osi ite lo yabụ olile anya na ọ ga - enyere m aka imeziwanye!
Tags: aionye siri nri botonye isi nriụlọ ahịa nriEbeeụlọ ahịa
Infographic: Otu netwọkụ mmekọrịta na-emetụta ndụ anyị
Kedu ihe kpatara na naanị 20% nke ndị na-agụ akwụkwọ na-apịgharị n’isi edemede gị